Orinasa sy mpamatsy potasioma nitrika China | Lemandou
Kristaly fotsy na Granular
Nitrogen (toy ny N)%
Potasioma Oksida (toy ny K2O)%
Ny synergy eo anelanelan'ny cation (K +) sy ny anion (NO3-) dia manamora ny fampiakarana ny ion roa amin'ny fakan'ny zavamaniry.
Ny fifandraisana misy eo amin'ny nitrate voadidy ratsy sy ny potasioma voadidy tsara dia manakana ny fampidirana potasioma ny poti-tany, izay ahafahan'ny zavamaniry maharitra elaela kokoa.
Ny NOP dia manampy ny voly hanangana rindrin'ny sela matanjaka kokoa, noho izany dia mampitombo ny fanoherana ny zavamaniry amin'ny aretina.
Manatsara ny fahafahan'ny zavamaniry manohitra ny haintany.
Ny NOP dia misy kristaly fotsy ary tsy mofomamy amin'ny toe-javatra fitehirizana mahazatra.
Ny MOQ an'ny harona miloko OEM dia 300 taonina. Fonosana tsy miandany amin'ny habetsaky ny malefaka ilaina.
Ny vokatra dia entina amin'ny sambo kaontenera any amin'ny seranana isan-karazany ary avy eo afaka aterina mivantana amin'ny mpanjifa. Noho izany, ny fikirakirana dia tazonina farafahakeliny, miainga amin'ny ozinina famokarana ka hatramin'ny mpampiasa farany amin'ny fomba mahomby indrindra.
Ny NOP dia azo afangaro amin'ireo karazana zezika tsy voavahan-drano rehetra ary tsy misy singa manimba ny zavamaniry. Ny NOP dia loharano potasioma mety, tena be mpampiasa, azo ampiharina amin'ny dingana fenolojika rehetra amin'ny vokatra.
Amin'ny fambolena K tsy fahampiana na amin'ny vanim-potoana fenolojika kritika, ny NOP dia afaka manome loharano K haingana hamahana ny tsy fahampiana amin'ny alàlan'ny fampiharana foliar.
Amin'ny fampiharana ravina ravina ravina ravina ravina ravina ravina dia tokony ampiharina amin'ny 0,5 ka hatramin'ny 3% arakaraka ny taonan'ny ravina, Ny fahatsapana ny vokatra sy ny toetr'andro, amin'ny toetr'andro mangatsiaka dia mety ho avo kokoa ny habetsany.
Ho toy ny torolàlana ankapobeny, ho an'ny ravina manan-tsaina amin'ny fambolena sy fiompiana voninkazo, ny fampiharana ravina ravina dia tokony ho eo anelanelan'ny vahaolana 0,5 sy 1%, ho an'ny voankazo dia afaka miala amin'ny vahaolana 1.0 ka hatramin'ny 3.0%.
Ny NOP dia azo foanana amin'ny taha ambony 300 g isaky ny litatra amin'ny 20ºC. NOP dia novokarina miaraka amin'ny atiny 0,2% ambony indrindra
Tehirizo ao amin'ny trano mangatsiaka, misy rivotra ary maina, lavitra ny hamandoana, ny hafanana na ny fandrehitra.
Aza afangaro amin'ny fangaro organika na solifara na reducer mandritra ny fitehirizana sy ny fitaterana raha misy ny fipoahana. Arovy amin'ny masoandro sy ny orana ny fitaovana mandritra ny fitaterana. Ampidino am-pitandremana am-pitandremana raha sendra fianjerana.
Manaraka: Manezioma manezioma